Izindlela Zokufunda | I-innovative Technology Solutions
I-innovative Technology Solutions inikeza izinqumo ezehlukene uma kuziwa ezimweni zokufunda. Kungakhathaliseki ukuthi uthanda ukufunda yedwa noma ngeqembu, i-ITS yenza konke okusemandleni akho ukuze uthole induduzo nokulula.
I-innovative Technology Solutions ezinikezwe i-1 KU-1 Indlela yokuqeqesha ivumela i-100% ngokwezifiso zezifundo kanye nesimiso somfundi ngamunye.
I-innovative Technology Solutions inikeza ukuqeqeshwa okufundela ekilasini kubafundi abavela emhlabeni wonke.Isixazululo sethu sihlanganisa zonke izinsizakalo ezihlobene nokuqeqeshwa ezifana ne-visa usizo lokuhamba ngezindiza njll.
I-ITS ngokukhethekile ukuhlela ukuqeqeshwa koqeqesho kwi-site ukuvumela ukuba ube nendawo ejwayele ngemishini ejwayele ukuqinisekisa ukuthi kulula nokuthuthuzela.
Umfundisi ulayishwe ku-intanethi
Ukuqeqeshwa kwe-Instructor Led Online kuqinisekisa ukuthi kuyindlela elula kakhulu yokufunda emndududeni wekhaya lakho, ihhovisi noma yimuphi indawo ozikhethelayo.